I-Raw Tianeptine powder (66981-73-5) Abavelisi - Phcoker Chemical
I-tianeptine powder iyinto ye-nootropic kwaye i-serotonin ekhethileyo yokunciphisa i-serotonin iphinda iphinde ivuselele (SSRE). Ngokubanzi ......
Amandla: 1190kg / inyanga
I-Raw Tianeptine powder (66981-73-5) ividiyo
I-Raw Tianeptine powder yi-agent anti-depressant ne-novel profile ye-neurochemical. I-Raw Tianeptine ipowder ayibonakali ihambelana neengxaki ezingqondweni, iingqondo, ubuthongo, i-cardiovascular or bodyweight nemiphumo ephantsi kwaye inokusetyenziswa kakubi kokusetyenziswa kakubi. I-Raw Tianeptine powder ineprojekthi ye-pharmacokinetic efanelekileyo. Ayingekho phantsi kwe-first-pass pass hepatic metabolism, ine-high availability and distribution distribution, kwaye ipheliswa ngokukhawuleza. Nangona oku kunikezela inzuzo ye-Raw Tianeptine powder phezu kwe-tricyclic anti-depressant agents ngokubhekiselele kwi-titration titration, utshintsho lwonyango kunye nokusetyenziswa kweziyobisi, ukupheliswa kwayo ngokukhawuleza kubambelela kumathemishana omlinganiselo obaluleke kakhulu. I-Raw Tianeptine i powder ihluke kwiinkcenkceshe ezininzi zokuxhatshazwayo kuba akuyiyo i-metabolised system ye-hepatic cytochrome ye-P450, ebonisa ubungako obuncinane bokusebenzisana kweziyobisi; le nto inomdla kubantu abadala.
I-Raw Tianeptine powder (66981-73-5) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-Raw Tianeptine powder
Igama leKhemikhali I-Raw Tianeptine powder; 66981-73-5; 72797-41-2; I-Raw Tianeptine powder Acid; I-Raw Tianeptine powder
uhlobo Numama Yocon
Iqela leziyobisi iipasiti ezidandathekileyo
Inani leCAS 66981-73-5
I molecular Fi-ormula C21H25ClN2O4S
I molecular WSibhozo 436.951 g / mol
IMasaisotopic Mass 436.122 g / mol
Ukuxuba Point 148
Point yo kubilisa 609.2
Sukufaneleka Akukho mhla okhoyo
Aukuguquka Yisiza esetyenziselwa ukunyanga iziqulatho ezinkulu (ukunyameka, ukulinganisela, okanye ubunzima).
I-Raw Tianeptine powder (66981-73-5) Inkcazo
I-Tianeptine powder yiyobisi elisetyenziswa kakhulu ekuphuculeni iimpawu zengxaki enkulu yokudandatheka (MDD). Kuye kwasetyenziswa ekuncedeni isifo sengqondo sesifo sengqondo kunye nesifo se-asthma. Ulwakhiwo, lubalwa njenge-tricyclic antidepressant (TCA), nangona kunjalo, inezixhobo ezahlukeneyo ze-pharmacological kunezinto ezixhomekeke kwi-tricyclic antidepressants. I-Tianeptine yafunyanwa kwaye yafunyanwa ngumenzi wesizwe saseFransi yoPhando lwezoPhando kwi-1960s. Amagama ebhanki aquka iStablon, Coaxil. ITatinol, Tianeurax kunye neSalymbra.
I-Tianeptine powder ayibonakali ihambelana nokungaqondi kakuhle, isifo sengqondo, ubuthongo, i-cardiovascular or bodyweight nemiphumo kwaye inomgangatho ophantsi wokusetyenziswa kakubi. I-Raw Tianeptine powder ineprojekthi ye-pharmacokinetic efanelekileyo. Ayingekho phantsi kwe-first-pass pass hepatic metabolism, ine-high availability and distribution distribution, kwaye ipheliswa ngokukhawuleza. Nangona oku kunika izibonelelo kwi-Raw Tianeptine powder phezu kwe-tricyclic anti-depressant agents ngokubhekiselele ekutheni i-dose titration, utshintsho lwonyango kunye nokusetyenziswa kweziyobisi, ukupheliswa kwayo ngokukhawuleza kubambelela kumathemishana amanani. I-Raw Tianeptine i powder ihluke kwiinkcenkceshe ezininzi zokuxhatshazwayo kuba akuyiyo i-metabolised system ye-hepatic cytochrome ye-P450, ebonisa ubungako obuncinane bokusebenzisana kweziyobisi; le nto inomdla kubantu abadala.
Kungekudala, i-Tianeptine ifumaneka kumazwe aseYurophu, aseAsia, naseMzantsi Melika. Kuvinjelwe eUnited Kingdom kwaye ayilunyanzelwanga ngamachiza e-United States.
I-Tianeptine powder (66981-73-5) Indlela yokuSebenza
Uphononongo olutshanje lubonisa ukuba i-tianeptine yenza njenge-agonist ngokupheleleyo kwi-mu-type receptor ye-opioid (MOR). I-receptors ye-opioid njengangoku ifundiswa njengenjongo efanelekileyo yezilwanyana ezixinzelelekileyo. Kukholelwa ukuba iziphumo zekliniki ze-tianeptine zihlawulwa ngokumodareyitha kwayo kwezi mpahla. Ukongeza kwizenzo zalo kwi-receptor ye-opioid, iiphando zangaphambilini zihlawulise isenzo saso kwimpumelelo ye-serotonin receptor dopamine (D2 / 3) kunye ne-glutamate receptors.
I-Tianeptine powder yinto ekhethekileyo yokuxhatshazwayo kunye ne-anxiolytic imithi ekhuthaza ukufunyanwa kwe-serotonin (i-5-hydroxytryptamine; i-5-HT) kunye ne-5-hydroxyindoleacetic acid (i-5-HIAA) kwiisishu zobuchopho.
Nangona i-serotonin ye-monoaminergic neurotransmitter (i-5-HT), i-noradrenaline (NA) kunye ne-dopamine (DA) iboniswe ukuba ihambelana nokuvela kweengxaki zokudandatheka, ngoku kuyaqaphela ukuba ukulahlekelwa kwe-monoamine akwanele ukucacisa indlela yokwenza izinto ezixhasayo mayeza.
Ukusetyenziswa kwe-Tianeptine powder (66981-73-5)
▪ I-Tianeptine ithuthukise iimpawu zengxaki enkulu yokudakumba (MDD)
▪ I-Tianeptine inceda isifo sofuba nesifo se-asthma
▪ I-Tianeptine iphucula umvakalelo kwaye ikhuthaza ukuxhalabisa.
▪ I-Tianeptine yandisa ukuba i-serotonin ingakanani ingqondo
▪ I-Tianeptine ikhuthaza ukukhuthazwa, ukugxila kunye nengqiqo, ukunqanda uxhalaba, ukuvuselela nokunciphisa ukukhathala kwengqondo.
Ukuphakanyiswa kwe-Tianeptine powder (66981-73-5) Isisombululo
I-Tianeptine powder ngokuqhelekileyo ibhalwe kwi dose ye-12.5 mg kwaye ithathwa kathathu ngosuku. Ngokungafani nezinye i-TCA kunye ne-serotonin e-reuptake inhibitors (SSRIs) ekhethiweyo, i-tianeptin dose ayidingi ukunyuka kancane kunye ne-taper xa unyango luyekile.
Imiphumo emibi ye-Tianeptine powder (66981-73-5)
Imiphumo emibi ye-tianeptine powder iyamangalisa. Xa kuthelekiswa namanye ama-TCA kunye neklasi ye-SSRI ye-antidepressants, i-tianeptine powder iphantse ikhululeke kwimiphumo emibi. Nangona iprofayili yempembelelo yecala, kubalulekile ukuba ungaxubeki ne-tianeptine kunye ne-monoamine oxidase inhibitors okanye ezinye izidandlululo njengoko inhlanganisela ingasongela ubomi. I-tianeptine ayifanele ixutywe kunye ne-anesthetics kunye nokusetyenziswa kwayo kufuneka kuphelise i-24-48 ngaphambi kokungenelela kokutyatya okufuna i-anesthetics okanye i-hypnotics. Nazi ezinye ezimbalwa iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo kunye ne-tianeptine.
▲ Utshintsho lwesondlo
▲ Ukucindezeleka okuphefumulayo
▲ Umbono ongezantsi
▲ Ukunyuka kwesondo
▲ intloko ebuhlungu